Ogaden News Agency (ONA) – Waa Kuma Caalimka Rabigii Ku Xidhan ( من هو العالم الرباني )
Waa Kuma Caalimka Rabigii Ku Xidhan ( من هو العالم الرباني )
Waxay dadweynihii caadiga ahaa, oo ah kuwa ay culumada Somalida u yaqaanaan (Caamada) iyagoo ula jeeda aqoon yaraan, waxay aad ula yaaban yihiin qaar badan oo ka mid ah culumadoodii meesha ay kasoo raamsadeen. Waxaan aad u jeclaystay markaa inaan helo waxyaabaha laga qoray arintan. Baadhitaankii aan waday waxaan kula kulmay maqaal aan jeclaystay oo ninka lagu magacaabo Ibraahiim Ismaaciil uu ka qoray arintaa, sababtoo ah meela badan ayay iska qooransadeen fikirka uu qoray aqoonyahankan u dhashay dalka Suuriya iyo midkaan aaminsanaa.
Maqaalka oo uu cinwaan uga dhigay ( من هو العالم الرباني ) ayuu yidhi; waxaan ku barbaarnay tan iyo yaraantanadii ixtiraamka culumada, waxaanan jeclayn in aan la saaxiibno oon ka faa’idaysano duruusta ay bixinayaan iyo khudbadaha ay jeedinayaan, oon akhrino kutubta ay qoraan. Waxaa ka mid ahaa culumo aqoon fiican (Raasikh) leh iyo qaar ka hooseeya. Qaarkood ayaa markaad maqasho isagoo ka hadlaya dagaaladii Badar iyo Khandaq aad is-odhan kani waa libaaxyada islaamka oon ka dhicin Khaalid ama Abuu-Cubayda, ama Qaacqaac RC. Qaarkood ayaa markaad maqasho iyagoo ka hadlaya waaqica ay muslimiinta ku sugan yihiin maanta aad is-odhan midkani wuxuu Hogaanka u qaban lahaa Kacaanka socda haduu heli lahaa rag garab istaaga. Qaarna waxaabad is-odhan wuxuu leeyahay haybad iyo soo-Jiidasho (Charisma) u qalanta inuu noqdo Khaliifkii muslimiinta. Hasa ahaatee markay bilaabatay Kacdoonkii Carabta, oo la gaadhay waqtigii lakala bixi lahaa, waxaan aragnay qaar badanoo ka mid ahaa oo Ibnu Salool (waa ninkii Munaafiqiinta Xukumay) uu ka fiican yahay, anagoo ku wadnay inay la mid noqon doonaan asaxaabtii Rasuulka CS ay ka midka ahaayeen Miqdaad RC iyo Sacad Ibn Macaad RC ee ku yidhi Rasuulka CS markuu yidhi ila taliya; Rasuulkii Ilaahayow; ku odhan mayno sidii Yahuuda ay dhaheen ee ahayd; adiga iyo rabigaa taga oo soo dagaalama, halkan anaga halkan ayaan idiin sii fadhinaynaaye (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ), Waxaamse ku leenahay; Adiga iyo rabigaa Dagaalama anagana dagaalka waan idinla galaynaaye. Walaahi ayaan ku dhaaranaye hadaad baddan na jiidhsiiso, waan kula jiidhaynaa :
ولكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ؛ والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك
Culumadii laga filayay inay sidaa dhahaan oo hormuud u noqdaan shacabka ayaa dib ugu gurtay meel aan lagaba filaynin. Halkaa waxaa ku dhacay caalim badan oo aqoon loo tiriniyay iyo geesinimo. Hadaba waxaa loo baahan yahay in la qeexo qofka lagu tilmaamayo Caalim sifooyinka laga doonayo inuu yeesho.
Ugu horeyn, caalim, ama ha ahaado mid aduunyo (Xisaab, Joqoraafi, Dhaqtar, Handasa iwm) ama ha ahaado mid Diineed, waa inuu aqoontaa xirfad ahaan uu soo bartay oo uu yaqaano siday u kala dhigmaan fankaa uu sheeganayo. Kutub badan ayaa arintaa ka hadashay.
Marka dhanka Diinta loo kaco, caalimka inuu noqdo mid cilmi gaar ah ku takhasusay sida Xadiithka, ama Tafsiirka ama Fiqiga. Hasa ahaatee tilmaanta aan doonayno ee ah Rabaani (Caalim Tabi Ku Xidhan), iyo aqoontiisa way kala duwan yihiin. Qofka inuu aqoon fiican u leeyahay wuxuu soo bartay qofna uma diidi karo, kamana qaadi karo inuu yahay caalim. Sidaa daraadeed ayay dadka ka qasantaa markay arkaan caalim u dhaqmaya si kasoo horjeeda dhaqankii islaamnimada, markaasuu kusoo boodi inuu ka qaado sifadaa. Arintuna sidaa ma’aha. Inbadan ayuu Ilaahay ku sheegay ree bani israaiil inuu siiyay aqoon ahasa ahaatee ay dhaafsadeen maal. Aqoon wey leeyihiin hasa ahaatee waxay ku badasheen nolol aduunyo inay ku helaan.
Ma’aha in la’is weydiiyo; Mayahay Sheekh Caalim ah, ee waa; Ma Yahay Sheekh Ilaahiisii Ku Xidhan oo Rabaani ah. Sidaa daraadeed; qofka waa inuu yaqaanaa sifooyinka lagu garto Caalimka Rabaaniga ah.
Dr. Yusuf Al-Qardawi kitaab uu ka qoray oo uu ugu magacdaray; Nolosha Rabaaniga ah iyo Cilmiga الحياة الربانية والعلم ayuu aad uga faalooday arintaa, waxaana ka mid ahaa buu yidhi qoraaga; Inuu Caalimka Rabaaniga ah leeyahay sifooyinka ay ka mid yihiin; Inuu Ilaahay Cidaan ahayn Rabi ka Dhiganin, oo uusan ka doonanin Gargaar. Inuu Ilaahay Xukunkiisa midaan ahayn u aqoonsanin xukun, oo Ilaahay Raaligalintiisa uu yahay hadafkiisa.
Rasuulka CS sidaa ayuu kula baayactami jiray asaxaabtiisa in aanay cabsi waa lagu eedeyni darteed uga leexanin jidka Ilaahay وألا تأخذهم لومة لائم , Ilaahayna wuxuu culumada lagalay balanta ah in aanay qarinin cilmiga oy dadweynaha u cadeeyaan xaqiiqada. Iyadoo Ilaahay uu balanqaaday inuu marinayo cadaab daran midkii qariya, bal ka waran Caalimka waxaan jirin sheega oo xaqiiqada qariya ama iyadoo dhalanrogan u sheega dadweynaha.
Wuxuu kusoo gunaanaday qoraaga maqaalka Xadiithkii Rasuulka CS uu ku sheegay; Jihaadka ugu Fadliga badan inuu yahay Erey Xaq ah oo lagu hor yidhi xaakim jaa’ir ah. Ugu dambayntii wuxuu qoraaga kusoo xidhay gabaygan macnihiisu yahay;
Cumaamad la madoobeeyay ama la cadeeyaykamadhigto qofna caalim ama faqiih. Maxay badan yihiin madaxyo aan u qalmin kuwa sita, iyo qaar gaadhay meela sare. Ilaahay wuxuu fiiriyaa Quluubta iyo waxa ku jira ee ma fiiriyo Cumaamadaha iyo dharka la xidhan yahay ..
إن العمائم سودت أو بيضت لا تصنع العلماء والفقهاء
كم من رؤوس لا تليق بحملها وهناك أرؤس تبلغ العلياء
الله ينظر للقلوب وما حوت لا ينظر اللفات والأزياء
Markaan maqaalkan akhriyay waxaa isoo hormaray culuma badan oo u dhashay Ogadenya oo sidaa uu sheegay qoraaga ka muuqday meel aanay dadweynaha ka filaynin. Yaa islahaa Sheekh Umal ayaa intuu ka hadlo dhibaatada uu Meles u gaystay Somalida ayaa duudsiyi doona dhibaatada uu u gaystay shacabka Ogadenya. Yaase islahaa maanta ayuu intuu tagay Jigjiga ayuu ku hadli waxaad maqasheen. Aaway Sheekh Shibli iyo Shakuul. Meeye culumadii lacagaha kaga qaaday Carab iyo Cajam jihaad ayaan kula jirnaa gaalada Abyssinia?
Hadal waxaa dhameeyay Sayidinaa Cali ibn AbiDhaalib markuu yidhi; Xaqqa laguma garo hebel ee Xaqqa faham saad u aragto dadkiisa.
وما أجمل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله.